Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itiyoophiyaa kilaabni Kubbaa Miilaa Jimmaa Abbaa Jifaar waldorgommii federeeshinichi qopheessu kamirattuu akka hin hirmaanne ittisuu beeksiseera. - ! - OBN
Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itiyoophiyaa kilaabni Kubbaa Miilaa Jimmaa Abbaa Jifaar waldorgommii federeeshinichi qopheessu kamirattuu akka hin hirmaanne ittisuu beeksiseera.
OBN Gur 19,2011 - Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itiyoophiyaa kilaabni Kubbaa Miilaa Jimmaa Abbaa Jifaar waldorgommii federeeshinichi qopheessu kamirattuu akka hin hirmaanne ittisuu beeksiseera.
Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itiyoophiyaa akka beeksiseetti, kilaabni Kubbaa Miilaa Jimmaa Abbaa Jifaar Gurraandhala 29,2011 irraa kaasee waldorgommii federeeshinichi qopheessu hundarraa ittifamuu ibse.
Akka ibsa federeeshinichatti kilaabni Kubbaa Miilaa Jimmaa Abbaa Jifaar kan ittifame taphataa Abdulfataa Kamaal jedhamuuf kanfaltii irraa eegamu waan kanfaluu dideefiidha.
Taphataan kubbaa miilaa Abdulfataa Kamaal kilaabicha waliin osoo waliigaltee qabuu Fulbaana 2010 irraa kaasee sababa waliigaltichi addaan citeef Koree Disipiliinii federeeshinichatti iyyata kan galfate yoo ta'u, korichi iyyata taphatichaa ilaaluun mindaa taphatichaaf kilabichi hin kanfale guyyaa shan keessatti kilabichi akka kanfalu xalayaa Gurraandhala 12, 2010 kilabichaaf barreesseen beeksisuu ibseera.
kilaabni Kubbaa Miilaa Jimmaa Abbaa Jifaar ajaja kana hojiirra oolchuu waan dideef koreen disipiliiniichaa xalayaa Eebla 12,2010 barreesseen kilaabicha irratti tarkaanfii itti aanu akka fudhatu kan beeksise ta'us, kilaabichi garuu taphatichaaf kanfalticha osoo hin kanfaliin tureera jedheera.
Haaluma kanaan danbii ittiin bulmaataa Koree Disipiliinii bu'ura godhachuun Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itiyoophiyaa kilaaba Kubbaa Miilaa Jimmaa Abbaa Jifaar Gurraandhala 29,2011 irraa kaasee waldorgommii federeeshinichi qopheessu hundarraa kan ittise ta'uu beeksiseera.
Jimmaa Abbaa Jifaar PiriimiyarLiigii Itiyoophiyaa bara kanaan sadarkaa 9ffaarratti argama.
535 Views 2/26/19